DAWLADA INGRIISKA OO LAGU EEDEEYAY INAY SI XUN ULA DHAQANTO MAXAABIISTA | Toggaherer's Weblog
Dalwlada dalka Ingiriiska ayaa lagu eedaynayaa in ay si xun ula dhaqanto maxaabiista u xidhan ee lagu tuhunsanyahay in ay yihiin argagixiso.
Waxaana eedaymahaas ugu danbeeyay mid ay soo saareen hay’adaha u dooda xuquuqda maxaabiista caalamka oo ku eedeeyay saraakiisha amaanka ee dalka Ingiriiska in ay jidh dileen 29 qof oo ku xidhan xabsiyada dalkaas.
Waxaana tusaale ahaan loosoo qaatay nin asal ahaan kasoo jeeda dalka Morocco Fariid Hilaal kaas oo la xidhay wixii ka danbeeyay weerarkii 11 September 2001 markii weerarka lagu qaaday dalka Maraykanka.
Laamaha amaanka ee dalka Ingiriiska ayaa iska fogeeyay eedaymaha loosoo jeediyay, laakiinse waxa ay sheegeen in ay xogwaraysi la yeeshaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan ee lagu tuhunsanyihiin in ay ka tirsan yihiin ururo argagixiso.
Dawlada ingiriiska ayaa sidoo kale lagu eedaynayaa in ay dad la tuhunsanyahay in u gudbiso dalalka dibada halkaas oo ay kala kulmaan ciqaab qaadata mudo dheer iyaga oo aan wax maxkamada lasoo taagin.
Dadkaas ayaa qaarkood waxaa loo gudbiyay xabsiga uu maraykanku ku leeyahay jasiirada Cuba ee Guwaantanamo, iyadoo qaarka kalena ay ku xidhanyihiin dalal ku yaala qaarada Yurub
Xafiiska Wararka ee TogaHerer Oslo